Nisokatra tao Tolagnaro ny « Centre Vonjy » faha-enina mba handraisana ireo ankizy iharan'ny herisetra ara-nofo ao amin'ny faritra Anosy
Notokanana anio tao amin’ny faritra Anosy (atsimon'i Madagasikara) ny Centre Vonjy izay handray an-tanana ny trangana herisetra ara-nofo mihatra amin'ny zaza tsy ampy taona. Ity no ivotoerana faha-enina mitovy karazana aminy izay misokatra eto Madagasikara. Ity toerana ity dia vokatry ny fiaraha-miasa teo amin'ny Sampan-draharaha Koreana misahana ny fiaraha-miasa iraisam-pirenena KOICA sy ny UNICEF ary ny Governemanta Malagasy.
Tolagnaro, 05 Oktobra 2020: Anio, ny Filohan'ny Repoblika, niaraka tamin'ny mpikambana sasany ao amin'ny Governemanta, dia nitokana ny Centre Vonjy ao amin'ny hopitaly fanovozan-kevitra Philibert Tsiranana ao Amboanato, Tolagnaro. Ny fananganana ny trano dia tontosa tamin'ny alàlan'ny fanohanan'ny KOICA.
Nanomboka niasa tamin’ny volana febroary 2020 teo ity ivotoerana ity ary mandray an-tanana feno ireo ankizy iharan'ny herisetra ara-nofo any amin'ny faritra Anosy. Ity no ivotoerana am-perinasa fahenina taorian'ny nanokafana ny voalohany teto Antananarivo tamin'ny taona 2015, narahin'ireo tany
Toamasina tamin'ny 2016, Mahajanga sy Nosy Be tamin'ny 2017 ary Toliary tamin'ny taona 2020.
Ny fisokafan'ity ivotoerana ity dia dingana iray lehibe amin'ny fametrahana tontolo entina miaro ny ankizy ao amin'ny faritra Anosy. Raha ny marina, nanomboka ny volana febroary, ireo ankizy iharan'ny herisetra ara-nofo dia afaka misitraka mora foana sy maimaimaim-poana ny fandraisana an-tanana avy amin’ny matihanina amin’ny lafin’ny fitsaboana sy ara-tsaina ary mikasika ny lalàna; ka mivondrona ao amin’ny toerana iray avokoa izany tolotra rehetra izany. Noho izany dia tsy voatery mivezivezy mandeha lavitra intsony ny zaza sy ny ray aman-dreny rehefa hanaraka fitsaboana, na hametraka fitarainana sy hanaraka izany.
Araka ny fanadihadiana nasionaly tamin'ny taona 2018 momba ny herisetra mianjady amin'ny ankizy eto Madagasikara, dia tena ambany ny tahan'ny fitorohana ireny trangana herisetra ara-nofo ireny. Ny antony mahatonga izany dia ny fanoherana ara-kolotsaina, fa indrindra indrindra ny tsy fahalalana ny fomba fiasan'ny rafitra fiarovana ny zaza ary koa ny tsy fahatomombanan’izany rafitra izany. Zava-misy tena mampalahelo any amin'ny faritra Anosy ity herisetra mihatra amin'ny ankizy ity. Nanomboka ny volana janoary 2020, ny tambajotra mpiaro ny zaza dia nahazo tatitra mikasika tranga miisa 112 nahitana ankizy niharan'ny herisetra ara-nofo, ka zaza 23 (eo anelanelan'ny 4 ka hatramin'ny 17 taona) tamin’izy ireo no karakaraina ao amin'ny Centre Vonjy Tolagnaro.
Ny herisetra dia mety hiteraka olana goavana sy maharitra eo amin'ny ankizy, miaraka amin'ny fahasarotana amin’ny lafin’ny fahasalamana ara-batana, ara-nofo, ara-pananahana ary ara-tsaina. Ny maodely «Vonjy» dia ohatra tsara amin'ny sehatry ny fifampidinihana sy fiaraha-miasa eo amin'ny minisitera samihafa.
Ho an'i Madagasikara, maharesy lahatra tokoa ny vokatra azo teny anivon’ireo Centre Vonjy enina efa miasa, izay natsangana miaraka tamin'ny fanohanan'ny UNICEF sy ireo mpiara-miombon'antoka aminy.
Nanomboka ny taona 2015 ka hatramin'izao dia zaza miisa 5.067 no noraisina an-Tanana.
Rafitra fiarovana ny ankizy